Appointiv: Manamora sy manamora ny fandaharam-potoana fanendrena amin'ny fampiasana Salesforce | Martech Zone
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia ao amin'ny indostrian'ny fahasalamana ary nangataka anay jereo ny fampiasana ny Salesforce ary koa manome fiofanana sy fitantanam-bola mba ahafahan'izy ireo mampitombo ny fiverenany amin'ny fampiasam-bola. Ny tombony iray amin'ny fampiasana sehatra toa an'i Salesforce dia ny fanohanany tsy mampino ny fampidirana antoko fahatelo sy ny fampidirana vokatra amin'ny alàlan'ny tsenan'ny fampiharana azy, AppExchange.
Iray amin'ireo fiovana lehibe amin'ny fitondran-tena nitranga tao amin'ny dia ny mpividy an-tserasera dia ny fahafahana manao fanompoana tena. Amin'ny maha-mpividy ahy, te-hikaroka olana amin'ny Internet aho, hamantatra ny vahaolana, hanombantombana ny mpivarotra, ary… amin'ny farany… ho tonga any amin'ny tsipika fahatongavana araka izay azoko atao alohan'ny hifandraisako amin'ny mpivarotra iray.
Fandaharam-potoana mandeha ho azy
Nandalo ny fandaharam-potoanan'ny helo isika rehetra… nifandimby teo amin'ireo mpanapa-kevitra lehibe rehetra tamin'ny mailaka mba hiezaka hitady fotoana mety hifandraisana sy hanaovana fivoriana. Halaviko ity dingana ity… ary nampiasa fandaharam-potoana mandeha ho azy izahay mba hihaona aminay ireo vinavina sy mpanjifanay.
Ny fandaharam-potoana fanendrena mandeha ho azy, ho an'ny tena manokana dia fomba mahafinaritra hampitomboana ny tahan'ny fandaharam-potoana fanendrena ho an'ny ekipan'ny varotrao. Ireo sehatra ireo dia mampitaha kalandrie ary mahita fotoana iraisana eo amin'ny antoko, eny fa na dia ny ekipa manontolo aza. Ahoana anefa raha mampiasa Salesforce ny orinasanao ary mila an'io hetsika voarakitra ao amin'ny Sales Cloud io?
Appointiv mahatonga ny fandaharam-potoana sarotra amin'ny fotoana fohy miaraka amin'ny vahaolana mifanaraka amin'ny flexible izay 100% ampiasain'ny Salesforce. Ataovy automatique ny fizotran'ny manual ary jereo fa manomboka mikoriana ny asanao! Appointiv dia a fampiharana Salesforce teratany midika izany fa misintona fotsiny avy amin'ny AppExchange ianao ary manomboka - tsy mila fampidirana!
Miaraka amin'ny Appointiv, azonao atao ny mamela ny mpanjifanao hamandrika sy hitantana ny fanendrena azy manokana satria ny fahafahan'ny ekipanao manontolo dia havaozina ao amin'ny Salesforce amin'ny fotoana tena izy na inona na inona kalandrie ampiasainy. Ny Appointiv dia manome vahaolana amin'ny fandaharam-potoana tsy misy manahirana izay mahazaka mpikambana maro ao amin'ny ekipa miaraka amin'ny fandaharam-potoana sy kalandrie samihafa.
Mora ny fametrahana, mampiditra endrika tranonkala ary manamboatra ny marikao amin'ny alàlan'ny fampiharana Appointiv:
Ny vidin'ny Appointiv dia isaky ny mpampiasa… ary azonao atao mihitsy aza ny mampiditra mpampiantrano fivoriana ivelany izay tsy manana fahazoan-dàlana Salesforce amin'ny vidiny midina. Ny vidiny mangarahara dia midika koa hoe:
Tsy mila fahazoan-dàlana fanampiny ho an'ny mpampiasa Salesforce Experience (Community).
Tsy mila fahazoan-dàlana Salesforce fanampiny ho an'ny fidirana API ho an'ny orinasa Salesforce Professional Edition.
Tsy mila fahazoan-dàlana Salesforce fanampiny mba hananganana mpampiantrano tsy Salesforce anao.
Ny Appointiv dia tsy mitahiry angona mpanjifa ivelan'ny ohatra Salesforce-nao… ka tsy misy ahiahy momba ny olana ara-dalàna sy ny tranokalan'ny antoko fahatelo izay mety mandevona na mampita angon-drakitra.
Atombohy ny fitsapana maimaim-poana amin'ny Appointiv anao
Fampahafantarana: Mpiara-miasa aho Highbridge fa tsy misy ifandraisany amin'ny Appointiv.
Tags: appexchangeappointivfandaharam-potoana fanendrenafampidirana kalandriefanendrena varotrarahona varotrasalesforcempivarotra appexchangefandaharam-potoana fanendrena salesforcefampidirana kalandrie salesforcefanendrena web